Player Collection - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
30-12-2008, 09:11 PM
ပြန်စာ - Player Collection
အစ်ကိုတို့ ရေ ညီလည်းစမ်းသုံးကြည့်နေတယ်။Gom ကိုလေ။အသုံးတော့တည်တယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်များလည်း များများတင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလို့ရင်း
ပြန်စာ - Winamp အတွက် Skins လေးများ
ဘယ်နေရာတင် ရမှန်းမသိလို့ ဒီခေါင်းစဉ် အောက်မှာပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။ Winamp အတွက် Skins လေးများ ဆိုပေမဲ့ အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ အသုံးပြုနေဆဲ ပုံစံလေးနှစ်ခုပါ။ရှုပ်ရှက်ခတ်မနေပဲ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ လှပါတယ်။ ကြိုက်သက်နှစ်သက်တဲ့ အကို၊ အမတွေ အားပေးသွားဦးနော် ...
ကိုဖြိုးငြိမ်း, အသေးလေး(4tL), ကျော်ထက်ချိန်
ပို့စ် 16 ခုအတွက် 29 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အခုကျွန်တော်တင်မယ့်media playerကတော့ vlc player လို့ခေါ်ပါတယ်။
တော်တော်ကောင်းတဲ့ player ပါ။ format အားလုံးနီးပါဖွင့်လို့ရတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ pyaethuaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by pyaethuaung
ပို့စ် 440 ခုအတွက် 1,144 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Software Full Version များ
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။ Megaupload ဖြင့်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။ ifile ဖြင့်
[SIGPIC][/SIGPIC][COLOR="Red"][B][SIZE="7"][SIZE="6"][URL="www.kanzaw.com"]Mediafire Movies Download Zones[/URL][/SIZE][/SIZE][/B][/COLOR]
[QUOTE][COLOR="Red"]I'm not the uploader. I'm the link finder.
Credit to original uploaders...[/COLOR][/QUOTE]
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ breezes အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit breezes's homepage!
Find More Posts by breezes
MP3 Remix for Winamp 3.621
Last edited by breezes; 08-01-2009 at 06:43 PM..
24-02-2009, 07:22 AM
Winamp Skin လေးတစ်ခုပါ။ဒီဇိုင်းလေးက လန်းလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Window Media နဲ့ပတ်သက်ရင်….နောက်ဆုံး ထွက်တဲ့ Version လေးပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ရန်မျိုးအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်နိုင်, Desert Fox, nyinyi mt
IMDJ Music Player လေးလိုချင်လို့ပါ
software တွေလိုရင် အဲဒီမှာတောင်းရပါတယ်။
အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း error တက်နေပါတယ်...........
ဘယ်လိုကြောင့်လဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦးနော်............
D:\_Documents and Settings\_salesadmin\_My Documents\_Downloads\_Windows_Media_Player_12_0_7000_by_Misaki2009\_Windows Media Player 12.0.7000.7000\_Windows Media Player\_setup_wm.exe is notavalid Win32 application.
ပြန်စာ - Blaze HDTV Player 3.5
ကျေးဇူးပြု၍ ဒီလင့်လေးကိုပြန်တင်ပေးလို့ရမလား မသိဘူး...
်ဖိုင်က expired ဖြစ်နေလို့ပါ...
ကျေးဇူးပြု၍ ဒီလင့်လေးကိုပြန်တင်ပေးလို့ရမလား မသိဘူး.....ဖိုင်က expired ဖြစ်နေလို့ပါ...
ခုဒီဖိုင်လေးကို register လုပ်ဖို့အတွက် သူက "user name, e-mail, & serial number" တောင်းနေလို့ပါ.....
crack ဖိုင်ထဲမှာလဲ မပါဘူး.......အဲဒါလေး ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်တင်ပေးပါဦးနော်.............
15-05-2009, 11:37 AM
crack folder ထဲက Configuration.dll ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_BlazeVideo\_BlazeDTV 3.5 ထဲမှာ paste လုပ်ရမှာပါ။
replace လုပ်မလားမေးရင် yes ပေးလိုက်ပါ။
read me ဖိုင်ထဲမှာလည်း ပြောထားပါတယ်။
paste မလုပ်ခင် software ကို run ထားလို့ system tray မှာရှိနေရင် exit အရင်လုပ်ပါ။
blackNwhite, bonge, mohmoh, phoetharlay
22-05-2009, 01:41 AM
ဟုတ်ပါ့ ဟုတ်ပါ့ ကျွန်တော့်လဲ အဲဒီ error ပြနေတယ်။ ဖြေရှင်းပေးကြပါဦး။
13-06-2009, 02:40 PM
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ညီနေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ညီညီဇော်, ဇေယျာအေး, aung3355@gmail.com, blackNwhite
ညီညီဇော်, Oliveway, phoetharlay
amaung344, aung3355@gmail.com, jisub2010
23-06-2009, 09:17 AM
VLC 0.1.9.8a (latest of all)
သက်နိုင်, amaung344, phoetharlay
Winamp 5.5 (plugins+30 skins)
26-06-2009, 11:01 PM
WMP Skin Pack
အထဲမှာ ပုံစံ ၇ နှစ်မျိုးပါပါတယ်။ မရှိသေးတဲ့ အကို၊အမ များ အောက်မှာချလိုက်ပါနော်။
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 28-06-2009 at 09:11 AM..
၀င်းဒိုးပလေယာရဲ့ skin လေးတွေပါ။ဒီဇိုင်း ၇ မျိုး ပါ ပါတယ်။
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 27-06-2009 at 09:14 AM..
28-06-2009, 08:57 AM
Window Player Skin Pack - 3
အစ်ကိုတို့ ရေကျွှန်တော် Jetaudio လေးကရုပ်ပဲမြင်ရပြီးအသံမကြားရဖြစ်နေပါတယ်.....
ညီလေးအောင်ကျော်ဆန်းရေ- နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ဒီဆိုက် မှာ သွားချလိုက်ပါ.............
Originally Posted by အောင်ကျော်ဆန်း
ဖိုင်ပေါ်တင်ပြီးလို့ ကျွန်တော်မှာရှိတာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတာမှာယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။
ပြန်စာ - Cyberlink Power DVD ultra deluxe(extended edition)
[quote=PyaitSone;97128]Cyberlink PowerDVD Deluxe Edition v 8.0.1531
ကီးဂျန်ကိုတော့ McAfee က ထရိုဂျန်ဆိုပြီး ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဗျာ။ မူရင်း Rapidshare လင့်ကိုပါပေးလိုက်တယ်။ ဒေါင်းကြည့်လိုက်ပေါ့။ ကီးဂျန်လိုချင်ရင်တော့ အဲဒီကပဲ ဒေါင်းလိုက်တော့
part (1,2,3) သုံးခုလုံးဒေါင်းပြီး install လုပ်ရမှာပေါ့....................
install လုပ်ပုံ၊ လုပ်နည်းလေးကို နည်းနည်လောက်ပြောပြပေးပါလား.......................
Window Media Player အကြောင်းတစ်စေ့ တစ်စောင်း ကိုဖြိုးငြိမ်း Software များဆိုင်ရာ 11 01-04-2012 04:02 PM
Windows Media Player Dolby Surround 5.1 lehonchan Applications002-07-2008 11:16 AM